🥇 ▷ Kaameerahaagu wuxuu ku darayaa qaabab aad loo filan karo oo leh Android 10 ✅
Kaameerahaagu wuxuu ku darayaa qaabab aad loo filan karo oo leh Android 10
Tan iyo OnePlus 7 Pro Waxay ku sii dartay dadka isticmaala iibka waxay ka cawdeen awoodaha kamaradaha qaarkood oo ay tahay in la hirgaliyo. Shirkadda ayaa casriyeynaysa aaladda iyo kaameeradeeda si ay u keento warar xiiso leh, labadaba siyaabo iyo horumarin badan ee tayada sawirrada. Maanta waxaan haynaa war aad u wanaagsan oo adeegsadayaasha a OnePlus 7 Pro. Kaamiradda duulimaadka ayaa horey u haysata qaar ka mid ah sheekooyinka cusub ee ay ku dhawaaqday shirkadda Luulyo. Warkani wuxuu la socdaa Android 10 beta in aad hadda soo degsan karto oo aad ku rakibi karto qalabka.
Hal-goys waxay ku dhawaaqday in Terminalku ku duubi karo qalabka dareenka ballaaran iyo sidoo kale telefishanka. Faahfaahintan waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee ay adeegsadaan dadka isticmaala aaladda tan iyo markii la bilaabay waxaana ay u muuqataa inay mar hore run tahay. Haa, Waxaan haynaa war xun oo ku saabsan adeegsadayaasha aan dooneynin inay ku cusbooneysiiyaan Android 10. Warka wuxuu gaaraa uun beta mana ahan Android 9 Pie.
Hab wax lagu duubo iyo Habeenkii Habeenkii dhan dareemayaasha
Xilligan laga bilaabo, dhammaan adeegsadayaasha OnePlus 7 Pro ee cusboonaysiinta waxay lahaan doonaan laba astaamood oo cusub oo kaamirooyinka ah: Habayn habayn ah oo lagu duubo seddexda dareeraha gadaal ee kamaradda. Ilaa hadda kaliya dareemayaasha ugu weyn ee taageeraya duubista fiidiyowga iyo habkan caawa, wax aan isticmaaleyaashu aad u jeclaan.
Awood u lahaanshaha lagu duubi karo zoom aan khasaare lahayn ama dareemayaasha xagal ballaaran waa inay ahaataa wax la hirgaliyay bilowgii, laakiin ma aysan aheyn. Hadda Thanks to beta 10 beta cusboonaysiinta labada suurtagalba waxay ku jiri doonaan dhammaan dareemayaasha. Dabcan, kaliya gudaha Android 10.
OxygenOS ku saleysan Android 9 Pie wali ma helin cusboonaysiinta oo ay u badan tahay inuusan sameyn doonin. OnePlus 7 Pro ma qaadan doonto muddo dheer in la helo xasilloonida Android 10, sidaa darteed hubaal shirkaddu ma cusbooneysiineyso APK-ka kamaradaha ee Pie.
Waxaa la filayaa in dhowr toddobaad gudahood OnePlus 7 Pro si rasmi ah ayaa loogu casriyeeyaa Android 10 iyo waliba helitaanka astaamaha cusub ee kaamirada ee laga hirgaliyay beta. Hadda oo kaamirada aaladda ay aad u dhameystiran tahay, maxaad u maleyneysaa inuu ka maqan yahay?